Kutheni ividiyo ephambili ingasebenzi? - Iimpazamo
Eyona > Iimpazamo > Ikhowudi yempazamo 7135-indlela yokufezekisa
Ikhowudi yempazamo 7135-indlela yokufezekisa
Kutheni ividiyo ephambili ingasebenzi?
Ukuba eyakhoInkulumbuso yeVidiyousetyenzisoayisebenzi, Qalisa ngokuqinisekisa ukuba iakhawunti yakho iyasebenza, kwaye ujonge ukuqinisekisa ukuba uqhagamshelwe kwi-intanethi. Zama ukusebenzisaInkulumbuso yeVidiyokwesinye isixhobo, kwaye ukuba siyasebenza apho, qalisa isixhobo sokuqala.Julayi 16 2020
-Ezi zizibonelelo ezili-10 ezintsha zobulungu kwiAmazon ekufuneka uyazi ngo-2021.
Ndonwabile ukubakho kwakho apha. Wamkelekile kwakhona kwisitishi. Ndingumfo we-YouTube Deal Guy, Matt Granite.
Ngokucacileyo, andizukuphuma kakhulu. Kodwa ndichulumancile nangakumbi namhlanje kuba ubulungu bakho obuyinkulumbuso bunokukunika ukonga ngakumbi kwisicwangciso sakho se-smartphone kunye namajelo e-TV awathandayo. Kukho indlela yokuntywila kabini kunye nokufumana simahla nayo, bambalwa abantu abayisebenzisayo.
Inqaku lanamhlanje alixhaswanga, kodwa ukuba uyawuthanda umxholo nceda unike isithupha. Kuyanceda ukuzithemba kwam okanye ukusilela kwayo. Inombolo yesibonelelo sokuqala, ukugcina ngesicwangciso se-smartphone.
Kulo nyaka, kwi-2021, ngoku ungafumana i-10% eyongeziweyo yolondolozo lwakho xa ulilungu leNkulumbuso kwaye usebenzise elinye lala maxesha, utshintsha rhoqo izibonelelo zeefowuni ezingenamda kunye nezicwangciso ze-smartphone ze- $ 20 nje ngenyanga. Ngokubhekisele kusapho lwam, asisahambi phantse ngendlela ebesiqhele ukuhamba ngayo.
Ke ndicebisa wonke umntu ukuba ajonge ezabo izicwangciso ze-smartphone. Qinisekisa ukuba izibonelelo zesicwangciso onazo nomphathi wakho wangoku ziyinto oyisebenzisayo. Kubandakanya ukonga kwisicwangciso, uya kufumana le 10% yongezelelweyo njengemali yokuthenga ngetyala inyanga nenyanga.
Akukho zitshekhi zetyala, akukho fom zigcwaliswayo. Kwaye izicwangciso ezingenazingcingo onokuzifumana ngokwandisa ibhokisi yenkcazo yenqaku uya kufumana ikhonkco, ndisebenzisa amakhonkco adibeneyo ngendlela yam yokufumana imali, ukuba unobubele ukusebenzisa nayiphi na ikhonkco lam, itshintshe rhoqo Isiseko senyanga nenyanga, ke ukuba ubona into edibene nomboneleli ongaphambani ngayo ngoku, ndingakuqinisekisa ukuba ekuhambeni kwexesha, kuhlanganiswe ngezivumelwano ezithile ze-smartphone, uya konwaba, okanye ubunethemba lokuba ukonwaba xa kuziwa kumboneleli wakho we-smartphone. Kwaye indawo yesibini njengesaphulelo esiyintloko.
Oku okunene kubotshelelwe kunikezelo lweeyure ezimbini, into entsha kwiAmazon ngowama-2021. Ukutya okupheleleyo ngoku kubandakanya i-ed njengenxalenye yewindows ye-Amazon yasimahla yokuhambisa iiyure ukuba ulilungu leNkulumbuso. Ukutya okupheleleyo kuncinci kuhlahlo-lwabiwo mali, ayisiyiyo indawo endiza kuhlala ndiyothenga kuyo rhoqo, kwaye, bantu, sikhangela abathengisa ukutya okanye ukugcina okanye izinto ezilungileyo zokuthenga eAldi okanye kwiTrader Joe's okanye kwiCostco.
Ndinayo kweli jelo kodwa kwabo bathengayo kwi-Whole Foods oku kunokuba yinto efanelekileyo yokusebenzisa ngoku. Kwindawo yesithathu lukhetho lokuntywila kabini kwi-Prime Rewards yekhadi letyala. Kwaye ukuba awuthatheli ingqalelo eli khadi lekhredithi, ungakhathazeki ngokuntywila kabini xa unale khadi yeAmazon Prime Rewards.
Makhe ndihambise umfanekiso wam ezantsi kancinci kwifestile yomfanekiso wentloko yam egqithileyo eqhotyoshelwe emzimbeni wolutsha olufana nomzimba wolutsha kuninzi lwenu ukuze nibone ukuprinta okuhle. Umzekelo, ukuba ulungile kwiNkulumbuso yeRoku sisixhobo seendaba se-4K ye-HDR yemithombo yeendaba. Esi sisaphulelo se-29%.
khipha i-inki windows
Ugcino olulungileyo. Kodwa ukuba unayo i-Amazon Prime credit card kwaye uyisebenzise ukugqibezela ukuthenga kwakho, uza kufumana enye i-10% emva. Kwaye ngamanye amaxesha loo pesenti yi-15%.
Ukuba ujonga iiplagi ze-Kasa Smart ngoku, zitshiphu nge-15%, kodwa fumana isaphulelo esongezelelekileyo se-15% xa usebenzisa i-Amazon Prime credit card yakho. Kwaye kwixa elidlulileyo ndikhe ndabona ukubonelelwa kwemali ephindiweyo xa une-Prime Rewards yekhadi letyala ukuya kuthi ga kwi-20 okanye i-30%. Ndabona enye kumabonwakude enye kwiRobovac kungekudala.
Inombolo yenkulumbuso yenombolo 4. Ubulungu bakho obuyinkulumbuso bukunika izibonelelo kumaqonga aliqela, hayi iAmazon.com kuphela.
Thatha i-Shopbop njengomzekelo. Umfazi wam usaqala ukufumanisa ukuba ngaba lo ngumthengisi abamthandayo, kodwa ukuhanjiswa simahla kunye nembuyekezo yasimahla ayisiyonxalenye yobulungu bakho beAmazon Prime, kodwa xa ungathengisi kwaShopbop, eMpuma Dane, ukuhanjiswa simahla kweentsuku ezintathu kwaye simahla siyabuya ukuba ulilungu leNkulumbuso yeAmazon. Kuphezulu kwiphepha.
Kwaye kwiwebhusayithi endindwendwela kuyo rhoqo njengewoot.com, iwebhusayithi yemihla ngemihla enikezela ukuhanjiswa simahla kumalungu eNkulumbuso, iirhafu ezisukela kwi- $ 5.95 ukuya kwi- $ 11, kuxhomekeke kwimveliso kunye nomnikelo.
Kwaye ukonga kwakho kungadibanisa ngokukhawuleza ukuba ulilungu eliyinkulumbuso. Wowu, abo bangaphandle banamandla kakhulu. Kufana nepakethi ye-12 thabatha ipakethe ye-12 kwaye ndiza kusebenza kuyo ngaxesha lithile, ngethemba kule minyaka imbalwa izayo.
Ukuthetha ngokutya, ngaphambi kokuba ndifike kwii-freebies, i-Amazon Prime ubulungu inzuzo yesihlanu iboshwe kwiAmazon Fresh. IAmazon Fresh ibikade iyi- $ 15 ngenyanga, ngenxa yoko ungatsiba imigca emide xa uyokuthenga ngokuthenga kwi-Intanethi kwaye ukhethe iwindow yokuhambisa ekulungeleyo. Logama nje ubetha ixabiso loku-odola elincinci le- $ 50, uyakufumana ukuhanjiswa simahla.
Kwaye ndonwabile ngakumbi kolu tshintsho lobulungu be-Prime kuba ndihlawula i-15 yeedola ngenyanga ukusebenzisa nje ivenkile yokutya endiyithethileyo ubuncinci bendicaphukisa. Kwaye ndiyavuya bayilahla loo nto. Ukuba uqaphele, bendinomsindo kancinci xa ndidlula kwinkulumbuso yenombolo yesihlanu.
Xa ndikwi-funk, ndibuhlungu okanye ndinomsindo, enye yezona zinto zindonwabisa ngaphandle kwe-bubble tea kukunikwa. Ke ngenxa yenombolo yesithandathu neyesixhenxe kolu luhlu, ndiza kuphonononga simahla emva koko singene kumajelo kamabonwakude anikezelwayo, endicinga ukuba ayamangalisa. Ukuba awusazi ukuba njengenxalenye yeNkulumbuso yenombolo yesithandathu, iAmazon isungule inkqubo yokuqala yeAmazon yokufunda ngo-2021.
Kwaye amalungu eNkulumbuso angakhetha incwadi yohlobo lwasimahla lwenyanga nganye, eyinto entle engakholelekiyo. Ugcino longezwa ngokukhawuleza. Uninzi lwezi ncwadi luxabiswa nge- $ 4.99 okanye kwi-9.99 yeedola.
Ezi ndinazo ngoku zihlala zii- $ 4.99. Njengelungu leNkulumbuso, unokufumana incwadi ekhethwe ngokukhululekileyo, enesitayile okanye ethandwa kakhulu simahla.
Kubazali abangoogxa phaya njengam. Ndiqaphele ukuba incwadi yemifanekiso yabantwana ephezulu kakhulu kune- $ 4.99 nayo isimahla kumalungu eNkulumbuso kolu luhlu.
Uneminyaka emibini ubudala uthanda uninzi lweencwadi zemifanekiso endimbonisa zona kolu luhlu. Ke, ukuba ungumzali okanye umdala nje othanda abantwana okanye iincwadi zemifanekiso, uyagutyungelwa. Kuya kufuneka ndiqaphele ukuba amaBali akuVimba amaAmazon, ukufundwa kwawo okufutshane okutsha, ngoku asimahla kunye neNkulumbuso, kwaye intsha ngo-2021 kunye nepeki emnandi.
Phambi kokuba ndifike kumabonwakude nakwiPrime Video, inombolo yesixhenxe ibotshelelwe kwiimagazini, kwaye loo ndawo yaqala kwiiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo, apho amalungu eNkulumbuso anokufumana ubhaliso lweenyanga ezine lokuprinta iimagazini ngeesenti ezingama-99. Oku kuhle kuMhla woMama, uSuku loBawo, ibhanti lokumisa, isikhumbuzo xa uziva ungabizi kakhulu Ubuhle beli sipho kukuba ungaya kwivenkile yokutya, uthathe imagazini, ubeke isaphetha kuso. Ke unokwenzela umntu isipho somzimba kwaye ubonise ekhadini ukuba umrhumo wonyaka osendleleni usendleleni.
Ndichithe kuphela idola kwindawo yesibhozo, indlela entle yokonga kwizikhululo zakho zeTV ozithandayo kunye neentsuku ezingama-30 zasimahla ngokukodwa endicinga ukuba wonke umntu kufuneka azi ngazo. Ke ngoku ndiza kuvula ingqokelela yam nqaku yeNkulumbuso ixesha elandisiweyo kunye nomntu wonke ekhaya. Abantwana babuyile ekholejini.
Iholide yosapho lwakho ayithandeki ngendlela obucinga ngayo. Kwaye ufuna ukuthatha ithuba lokusasaza okuza nobulungu bakho beNkulumbuso. Ayisiyiyo kuphela ubulungu bakho obuyinkulumbuso obukunika ukufikelela kumdlalo bhanyabhanya ophumelele amabhaso nakwimidlalo yeTV kwiPrime Video, ekhuphisana neNetflix.
Kwaye unokucinga malunga nokuba ucinga ukuba amanqaku aphambili alungile okanye angcono okanye amabi kakhulu kwicandelo lamagqabaza, into ebalulekileyo ekufuneka uyiqaphele kukuba ungabhalisela ngokuzimeleyo amajelo akho owathandayo e-TV ngokudlula kwi-cable okanye umboneleli wesathelayithi. Eyona nto ilunge ngakumbi xa usike intambo. Kodwa ayisiyiyo into yokupha.
Njengelungu leNkulumbuso, iAmazon yandinika ukufikelela kuthungelwano endandingazi ukuba ndibhalisile kulo, simahla. Ke ukuba ujonge i-MGM apha, oh, 'hayi-brainer
Kutheni ividiyo yam ephambili ingasebenzi kwintonga yam yomlilo?
Cinezela kwaye ubambe Khetha kwaye Dlala / Phumla amaqhosha ngaxeshanye malunga nemizuzwana emihlanu. Okanye, ukusuka kwiscreen esikhulu sakhoUmlilo weTV, yiya kuseto. Emva koko yiya kwisixhobo. Ngenye indlela, unokukhupha intambo yombane kwisixhobo, linda imizuzwana eyi-10 emva koko uyixhume kwakhona.
Hee uYoutuber, kweli nqaku ndiza kukubonisa ukuba ulusebenzisa njani ulwazi lwakho lwe-STB emu kuTivimate, kwabo bangazi ukuba kuthetha ntoni oko, ungakhathazeki, ndiza kukubonisa kwaye uthathe inyathelo ngenyathelo ukuze uyiqaphele kuwo onke amanqaku am ndisebenzisa i-STB Emu Pro Ndisebenzisa ukuba kwintonga yam yomlilo awuyi kuba yimbaleki kwakhona mna buqu andisayisebenzisi le app kuba ndiziva ngathi iphelelwe lixesha ukuba wenza Ulawulo olukude kunzima ukuseta izinto ozithandayo ngoko ndiza kukubonisa indlela yokumisela.
Ke ufuna ukuya kwindawo yakho ekude kwaye ubambe iqhosha ok kwaye emva koko uye kuseto onalo. ukuya kwiiprofayili zakho uya kuba neprofayile yakho apha, ke khetha ukucwangciswa kwe-STB nantsi indlela oza kuyifumana ngayo idilesi yakho ye-mac, ke idilesi ye-mac kakuhle ewe ewe kuqala soloko ususa inombolo ye-serial kuqala kwaye uye kwidilesi ye-mac yibonisa ukuba cima inombolo ye-serial yiya kwidilesi yakho ye-mac bhala phantsi, uye kwi-portal url yakho kwaye uh, uyazi khuphela nje loo nto, bhala phantsi ukuze ukwazi ukuyilungisa kwi-tivimate ukuze siye kwitv - Yiya kwiscreen esikhulu endikhuphelileyo kwaye ukuba awunayo ndinamanye amanqaku endlela yokuseta ukuba uza kongeza uluhlu lokudlala ngoku endaweni yeekhowudi ezigqithileyo uza kuya kwi-stalker portal, ngenisa idilesi yeseva eyayiyiyo kuqala portal -URL oyisebenzisela oku ngoku. Ndinalo lonke ulwazi kwaye ndibhalise kwiwebhusayithi ebizwa ngokuba yi-Stick Subs Kulungile ukuba ufuna konke oku ungaya ku-FIRESTICKSUBSS.com okanye usebenzise nje nantoni na onayo kodwa kwabo bangenanto, FIRESTICKSUBSS.com kulapho ndi ndinayo loo nto ngoku ndingena kwi-portal url, eyakho inokwahluka ukuba uyifumene kwenye iwebhusayithi enkulu uyibeke apha kwaye ngoku siza kuyitshintsha idilesi ye-Mac Le yidilesi ye-Mac engene kuyo oza kuyifaka kwi-STB-Emu-Mac Idilesi ehlala iqala ngo-00: 1A: 79, ngoku ko Unako kwakhona ukwenza eyakho idilesi yeMac, qiniseka ukuba iqala ngo-00: 1A: 79 kunye nokudityaniswa kwamanani kunye neeleta.
imbonakalo ivula incitshisiwe
Amanani anokubakho naphi na ukusuka ku-a ukuya ku-f. Emva koko siye kolandelayo kwaye sicinge ukuba yonke into isetiwe kwaye uyasebenza kufanelekile ngoku sele kuvavanyiwe uninzi, hayi zonke ziyasebenza kodwa ubukhulu becala ziyasebenza, luvavanyo nje kunye nempazamo Kulungile, ke masiyibone ilayishiwe ilungile, ndihlala nditshintsha amagama ke ndiza kuyitshintsha kuba ezi zi-Fire Stick Subs. Ndiyifumene firesticksubs.com.
imvumelwano yebhodi yezitshixo
Ndiza kulibeka eli gama ukuze ndizazi ukuba ndilifumene phi okanye ndiyazi ukuba ibizwa ntoni na inkonzo kwaye ewe iya kukubonisa ukuba uyisebenzisa kanjani iremote ngoku ndiyithanda ngcono kuba ungongeza eyona nto uyithandayo ngaphezulu Yenza ngokwezifiso Inkqubo ikhawuleze kakhulu ndiyifumana ihamba ngokutyibilikayo njengoko ubona njengoko ndithatha eli nqaku izakhelo ezingama-60 ngomzuzwana ngoko inomdla kakhulu ngoku yindlela ekubonakala ngayo ndincoma ukufumana ingxelo yepremiyamu, ke yiya kuseto lokuvula ipremiyamu Kuya kufuneka ubenayo iakhawunti kwakhona oku kusebenza kwintonga yomlilo kunye nekhaka le-nvidia ubona ndinezinto ezininzi ezahlukileyo ezikhoyo kwaye ndinayo ibhalisiwe sele ibhalisiwe ngoko ijongeka ikunika imbonakalo yeCanada ndinguJerry d sinomboniso omkhulu wena namhlanje uyabona ukuba likhulu kangakanani ichibi ndiyathetha ukuba awusiboni isiphelo kukunika ezinye iindlela ngenxa yendlela endenze ngayo, ibiliphupha lakhe elo, ibiliphupha lakhe elo ebenalo ixesha elide kodwa I-bianca ekwiqela lomkhondo uthe abanye abantu bayakholelwa Ebebeka umqobo phezulu kakhulu ukuba ukukhubazeka kwakhe kuya kuba ngumqobo omkhulu ukoyisa. Kodwa intombazana engazange ibone kakuhle kwaye eyenze umqamelo waseHarvard kwiprojekthi yebanga lesibhozo yaba nombono wokuba nangona ndandimncinci wonke umntu wayeza kuba ulungile uthini ngezinye izinto ngaphandle kweHarvard kwaye andizukubakho njengeHarvard inombolo yokuqala? ezimbini zintlanu ezintlanu kwaye ndixelele umama xa ndikhwela ndihamba ngokungathi awunakundixelela kwaye ngoku iyimbatyisi yokuqala, ungazibona zonke iindidi zoololiwe ezibaleka kwiitreyini eyadini Ipaki de Ewe, ewe, ukuze ubone ukuba iarhente inemigca emininzi ezisa abakhweli kunye neendwendwe kulo lonke elaseSan Jose. Ndicinga ukuba ijongeka ngcono.
yile nto ndiyisebenzisayo, endiyisebenzisayo kuzo zombini i-Fire Stick kunye ne-Nvidia Shield apha eSan Jose naseCalifornia zinokuhlaziya ngakumbi njengoko zifumaneka. Thelekisa oko, xa isiza apha siza kuyizama ukubona ukuba icotha kangakanani isonka samasi esirhabaxa awunakubona zonke iindidi Awunakubona zonke izikhokelo ze-tv kodwa ndicinga ukuba kulula kakhulu kwezo Ngubani omtsha ndibonise oku kumanqaku am kwaye sineemoto zecvrolet apha nantsi i-STB Emu Pro kwi-Firestic kdried yam okanye entsha ndiyavuma ukuba yi-TV iqabane kwi-Fire Stick yam ukuze ubone Uyawenza umahluko yiyo loo nto ndisebenzisa i-tv ngokwam xa usebenzisa i-M3U, ihlala le ye-M3U, kodwa ikwenzelwe nabo bafumene ukwenziwa kwe-Mac ngaphambili kwaye bafuna ukuyicima bayicime nakuluphi na ulwazi endilushiyileyo kwinkcazo kwaye ndiyathemba ukuba uyalonwabela eli nqaku yiza ubeke izimvo kwaye ubhalise kwisitishi enkosi ngokubukela abantu abathembekileyo uFred kwaye ndinika ingxelo malunga neekhilomitha ezingama-700 zonxweme kukho iindawo ezininzi ezahlukeneyo
Ndiyilungisa njani impazamo yommeleli weHTTP kwiAmazon Prime?
Yiya eIvidiyo enkulu yeAmazonkwaye uvule umxholo ofuna ukuwubukela. Oku kufanele ukuba kungavulwa, kungabikhoImpazamo yommeleli we-HTTP. Ukuba usaya kulwa neImpazamo yommeleli we-HTTP, zama ukucoca ii-cookies zakho. Ngenye indlela, zama enye iseva okanye unxibelelane nenkxaso yabathengi yeVPN yakho.
Molo Thomas apha.
Namhlanje siza kuxoxa ngendlela yokulungisa umba apho iMac yakho ingazukulayisha iiwebhusayithi ezithile. Sinezilungiso ezintlanu ezahlukileyo ezicwangciselwe namhlanje, ke hlala ubukele. Kulungile, siza kuhamba ngezisombululo ezihlanu ngokweenkcukacha.
Ukuba enye ayisebenzi, zininzi ezinye ukuzama kwaye ndiyakumema ukuba uphinde ubukele iinxalenye zenqaku endinokuzenza ngokukhawuleza. Ndiyaxolisa ngale nto kwangaphambili. Ke masiqale, kwaye ngaphambi kokuba siqale, kuya kufuneka uqiniseke ukuba i-adblocker yakho okanye isoftware ye-antivirus (umz.
I-Norton, i-BitDefender, njl.) Ayibangeli ngxaki Ayibangeli ngxaki, ukuyikhubaza nokuzama ukuvula iwebhusayithi onengxaki nayo. Kulungile masiqale ngenombolo yokuqala: inyathelo lokuqala kukucofa kwi-logo yeApple (kwikona ephezulu ngasekhohlo) emva koko ucofe kuKhetho lweNkqubo kwaye nje ukuba ivule ucofe iNethiwekhi.
Ngoku kwithebhu ye-Wi-Fi (kwithebhu yasekhohlo) cofa ku-Advanced kwaye ngoku kufuneka sikhangele izinto ezimbalwa. Okokuqala, qiniseka ukuba uqwalaselo lwe-IPv6 lukhubazekile. Okulandelayo, siza kuhlaziya isivumelwano se-DHCP sokusetha kwakhona uqhagamshelo lwakho kwinethiwekhi.
Ngoku nqakraza kwiTebhu yeHardware kwaye uqiniseke ukuba ubumbeko lusetelwe ngokuzenzekelayo. Kulungile, ukuba ayisebenzi kuwe, masiqhubeke nendlela yesibini. Inani lesibini livula i-terminal kwaye kwisiphelo sendlela usebenze lo myalelo wenethiwekhi ulandelayo-setv6off Wi-Fi.
Khumbula ukuba inkcazo ikwathi ikope kwaye uyincamathisele endikucebisa ngayo kuba ayizukusebenza ukuba wenza typo. Lo myalelo kufuneka ubambe ngaphezulu kwazo naziphi na iisetingi eziphazamisa ukuseta i-IPv6 yakho icinyiwe. Ukuba ayisebenzi kuwe, masiqhubeke siye kwinombolo yesithathu.
Kulungile, le ndlela inzima ngakumbi ngoku. Kwimenyu yebar yomfumani, thepha Yiya phezulu kwaye nje ukuba ucofe u-Go, imenyu ehlayo ivula eyimpompo kwiFolda. Enye into kuko konke oku kukuchwetheza lo myalelo ulandelayo: command + shift + G Ngapha koko, iya kuvula ifestile apho uchwetheza / njl / imikhosi.
Ngoku vula ifayile yenginginya nge-TextEdit kwaye ndiyakumema ukuba unqumame inqaku ngoku ukuze uqiniseke ukuba yonke into ijongeka ngokufana neyam. Ukuba ayibonakali ngathi yeyam, cofa kwinqaku elinesihloko esithi 'Imikhosi elungisiweyo' kwinkcazo njengoko oku kubandakanyeka kancinci kwaye kunokuba yingxaki yakho. Kulungile, inombolo yesine.
Ukwenza oku, siza kuyicima idatha yethu yeSafari, okt ukuvula i-Safari kwaye ucofe kwi-Safari phezulu ngoku ucofe kwiisetingi ngoku cofa kwithebhu yokhuseleko lwedatha kwaye ucofe ku 'Lawula idatha yewebhusayithi'.
Cofa ku 'Susa konke' apha ngezantsi xa ulayisha, kwaye xa ubona okuzivelelayo cofa nje ku 'Susa ngoku'. Oku kuyakucima yonke idatha yakho ye-Safari kwaye kulungiswe ingxaki. Ukuba ayenzi njalo, sinenombolo yesi-5.
Ke kwesi sisombululo sokugqibela, siza kuqinisekisa ukuba zonke ii-proxies zakho zewebhu zicinyiwe, cofa ku-Applelogo kwaye ucofe kuKhetho lweNkqubo, emva koko ucofe kwiNethwekhi kwaye uvule ithebhu yeWi-Fi Cofa phambili kwaye uvule iiProxies tab. . Qiniseka ukuba yonke into ephantsi 'kokukhetha inkqubo emiselweyo' ayiqwalaselwanga. Kulungile wonke umntu, yiyo loo nto yanamhlanje, ukuba akukho nanye kwezi zinto ziyalusebenzelayo ndibandakanyile ikhonkco leapile kwinkcazo ukuze ufumane uncedo kubo okanye ungabeka izimvo malunga nokuba yintoni ingxaki yakho kwaye mhlawumbi ufuna Isisombululo esithe kratya, kodwa ndiphendula kumagqabantshintshi kwaye ndiza kuzama ukukunceda.
Ke enkosi ngokubukela, ukuba oku kuncedile, nceda ushiye i-like okanye ubeke izimvo okanye ubhalise kwezinye zezi.